I-United States iphanda ukuphathwa kwexabiso kwiBitcoin | Iindaba zeGajethi
Imakethi ye-cryptocurrency, kunye neBitcoin ekhokelayo, ayinawo unyaka ubalaseleyo. Ixabiso lalo liwe kakhulu ukusukela ngoJanuwari. Inxalenye enkulu ngenxa yemigaqo emininzi kunye nezithintelo ekudala zifikile. Into echaphazele imarike ngendlela ephawulekayo. Kodwa kubonakala ngathi iingxaki azikapheli. Ukusukela ukuba iSebe lezoBulungisa laseMelika lisandula ukusungula uphando.
Olu phando lwenzelwe ukuba bonisa ukuba ixabiso le-Bitcoin kunye nezinye i-cryptocurrensets, ezinje nge-Ethereum, ziye zalungiswa, evela kwamanye amaqela. Ke bafuna ukubonisa ukuba ngaba izenzo ezingekho mthethweni zenziwe kwezi meko.
Imithombo eliqela sele ixelele amanye amajelo eendaba ukuba ayesazi ukuqala kophando e-United States. Ifuna ukwazi ukuba ixabiso leBitcoin linempembelelo okanye lizamile ukuba nefuthe. Phakathi kweendlela ezisetyenzisiweyo sifumana ukuphamba, okuthi ifuna ukukhukula imarike ngemiyalelo engeyiyo ke abanye abatyali mali bacinga ukuba kufuneka bathenge okanye bathengise.
Nangona ayisiyiyo kuphela, okoko kwafunyanwa enye yokuthengisa umnxeba. Kuyo, inverse isebenza kunye naye, ngenjongo yokunika umbono wokuba kukho imfuno kwintengiso. Ke, abanye abatyali mali bathatha isigqibo sokusebenza ngokunjalo, kule meko ngeBitcoin.
EUnited States baxhalabile ngobuqhetseba obunokwenzeka obuye benzeka ngeBitcoin kunye nezinye i-cryptocurrensets. Nangona ukukrokrela ukuba intengiso iye yenziwa gwenxa akuyonto intsha, kuba izaziso zolu hlobo ziye zavela ukusukela kunyaka ophelileyo. Kubonakala ngathi bekukho inyani kubo.
Olu phando lunokuthi masicinge intsingiselo eqinisekileyo yokungeniswa kommiselo kwimarike yemali yedijithali. Into ebonakala ngathi sele ikhona amaqela afuna ukuyenza, ngeGemini yamawele aseTwinklevoss e-helm. Iingozi ezinokubakho zeBitcoin zisandula ukuxoxwa eYurophu, nangona ungekabikho umgaqo malunga noku. Ngaba izinto ziza kutshintsha kungekudala?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-United States iphanda ngexabiso elinokubakho kwi-Bitcoin
Yintoni i-GDPR kwaye isisichaphazela njani njengabathengi?
I-Spotify izakuhlawula i-112 yezigidi zeedola ukusebenzisa umculo ngaphandle kwelayisensi